भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे – YesKathmandu.com
बुधबार ०६, असार २०७५
कञ्चनपुर । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।
दैनिक अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने गरेका बिरामीमध्ये सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी भाइरल ज्वरोका रहने गरेका छन् । दैनिक सयभन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी अस्पताल पुग्न थालेको अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट श्रीराम तिवारीले बताएका छन् ।
ओपिडी, इमरजेन्सी र जनरल वार्डमा भाइरल ज्वरोका बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेको उहाँले बताए । वर्षा सुरु भएसँगै भाइरल ज्वरो र पखालाका बिरामी बढेको उहाँले बताए ।
“दूषित पानीको प्रयोग र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमीका कारण भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण बढेको छ”, उहाँले भनै। भाइरल ज्वरोका कारण बिरामीमा हनहन्ती ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने र हात खुट्टाका जोर्नीहरु दुख्ने समस्या रहेको छ ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि पुग्ने अधिकांश बिरामीमा समेत पखाला र भाइरल ज्वरोको समस्या देखापरेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने अधिकांश बिरामीमा भाइरल ज्वरोका बिरामी अधिक रहेको पिपलाडी स्वास्थ्य चौकीका अहेव चेतराज भट्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भाइरल ज्वरोका दैनिक सत्तरीभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य चौकी पुग्ने गरेका छन् । रासस
नेविसंघको चुनावी मैदानमा भीड्दै छन यी फिल्म निर्माता र अभिनेता
प्रचण्डलाई योगेश भट्टराईको व्यंग्य -“फड्को हान्दा बीचैमा खसेर बेहाल हुनुहोला”
भारतसँग सम्झौता भएका विषय कार्यान्वयनमा लगिनेछ – प्रम
गगन थापा को हुन र ! उनले भन्दैमा सबै निःशुल्क दिने ?
सिमांकन समस्या हल गर्न आजै संयन्त्र गठन हुन्छः प्रधानमन्त्री
मागेको मन्त्री संख्या र रोजेको मन्त्रालय नपाए पौडेल समुह सरकारमा नजाने, देउवा समुहमा पनि विवाद
भूकम्प पीडितका नाममा आईएनजिओको कमाउ धन्दा, मोटरसाईकल ४५ हजार, गाडीको चार लाख भाडा
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा दर्जकुमार राई नियुक्त
चिनियाँ बारमा अर्धनग्न नेपाली चेली
रामप्रसाद राइ गाउँपालिकामा एमाले विजयी
आठ हजार जुटाउन नसक्दा प्रचण्डले पिटेका थिए सीतालाई
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा राजपाको अग्रता
आज रातभरमा अग्राख पलायन भने देउवाको भोली यसरी चम्कदैछ भाग्य
सरकार ढाल्न सिटौला,शेखर, मिनेन्द्रको सक्रियताको सुराक वालुवाटार पुगेपछि …
कांग्रेसको गडमा एमालेको धावा, दाङमा डगमगायो कांग्रेस